ဘဝရှင်သန်မှုဌာန - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
တနင်္လာ-ကြာသပတေး ၈.၀၀-၂၀.၀၀၊ သောကြာ-တနင်္ဂနွေ ၈.၀၀-၁၇.၀၀
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၇၄၉-၅၀
Samitivej မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ လူကြီးမင်းတို့ကို ကျန်းမာလာအောင် ကူညီပေးဖို့ တစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ဘဲ ဆက်လက်ကျန်းမာစွာ နေထိုင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သေချာစေဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဆေးပညာဟာ အကောင်းဆုံး စောင့်ရှောက်မှုလို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းလှတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေနဲ့ နေ့စဉ်ပုံမှန် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ချိန်ညှိလိုက်တာနဲ့ ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဝရှင်သန်မှုဌာနအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက လက္ခဏာတွေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ ခြုံငုံသုံးသပ်တဲ့နည်းကို အသုံးပြုပါတယ်။
ဘဝရှင်သန်မှုဌာနမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေကို သုခနဲ့ပြည့်ဝပြီး အချိုးညီမျှတတဲ့ ဘဝတွေရရှိအောင် ကူညီဖို့ ကုသမှုမျိုးစုံကို ကျွန်တော်တို့ ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကုသမှုတွေပေးနေတဲ့ အိုမင်းမှုတိုက်ဖျက်ရေး စောင့်ရှောက်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းတွေထဲက အများစုကတော့ ရောဂါကို စောလျှင်စွာသိရှိခြင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ ဒါဟာ လူနာတွေကို ဘာလက္ခဏာမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မခံစားရခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဆင့်တွေကို လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးရစေပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးမှုလို အဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံးခြင်းအားဖြင့် ဒီလိုသိရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ နာမကျန်းမှု အများစုကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ ကိုက်ညီအောင်စီစဉ်ထားတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ အတော်လေး ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ သူနာပြုများဟာဆိုရင်လည်း ဆီးချိုရောဂါ၊ သိုက်ရွိုက်နဲ့ အခြားဟော်မုန်းရောဂါများအပြင် အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ လူနာတွေအပေါ် ဟော်မုန်းဆေးများကိုအသုံးပြုပြီး ကူညီပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အထွေထွေရောဂါဆေးပညာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နည်းပညာအရ ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ ဆေးပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ အဖိုးတန်နေရာတစ်ခုရနေဆဲပါပဲလို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင်လည်း သဘာဝကုထုံး (homeopathy) နဲ့ အပ်စိုက်ကုထုံး (acupuncture) တို့လို သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ ခေတ်ပေါ်ဆေးကုသမှုတွေပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စောလျှင်စွာသိရှိခြင်းနဲ့ ကာကွယ်ခြင်းတို့ဖြင့် အိုမင်းမှု တိုက်ဖျက်ရေး အထောက်အကူများ
ဆီးချိုရောဂါ၊ သိုက်ရွိုက်နဲ့ အခြားဟော်မုန်းရောဂါများကို အဓိကထားတဲ့ ဟော်မုန်းဆေးများ
လေ့ကျင့်ထားတဲ့ အထူးကုများရဲ့ အပ်စိုက်ကုထုံး
Tachapol Virunhagarun, M.D.
Teeranun Tiyapanjanit, M.D.
Sudatip Kositamongkol, M.D.